သင့်ရဲ့ နေ့တစ်နေ့ကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ ရနံ့များ - Page 19 of 30 - Hello Sayarwon
Dr. Ye Mhan Linn မှ ရေးသားသည်။ တစ်ပတ် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
သစ်ကြံပိုးခေါက်နံ့ကို ရှူရှိုက်ရခြင်းက မှတ်ဉာဏ်၊ နိုးကြားမှုစတဲ့ သိမှုကိုပဓါနအားကိုးရတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ဆောင်ရွက်ရာမှာ အလွန်အကျိုးပြုပါတယ်။ သစ်ကြံပိုးမှာပါတဲ့ စိတ်ကိုလှုံဆော်နိုင်ခြင်း အာနိသင်တွေက စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို လျော့ကျစေပြီး အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုကို ပိုမိအားကောင်းစေပါတယ်။
စစ်ထရက်စ်အသီးအနံ့က စိတ်ကိုလန်းဆန်းတက်ကြွစေသလို ခန္ဓါကိုယ်မှာရှိတဲ့ norephinephrine ဟော်မုန်းပမာဏကို မြင့်တက်စေတယ်လို့လည်း လေ့လာမှုတွေအရ သိရှိရပါတယ်။ Norephinephrine ပမာဏနည်းပါးခြင်းက စွမ်းအင်နဲ့ အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေပြီး အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေနဲ့ စိတ်လေးလံထိုင်းမှိုင်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
စံပယ်ရနံ့ဟာ စိတ်ကိုတက်ကြွစေတဲ့ ရနံ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ သင်းပျံ့တည်ငြိမ်တဲ့သဘာဝကြောင့် စံပယ်ပန်းအဆီဟာ ကုန်ခမ်းသွားတဲ့စွမ်းအင်ကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေသလို အကောင်းမြင်စိတ်တိုးပွားစေတဲ့အတွက် စိုးရိမ်စိတ်များခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းတို့ကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။
How the Scent of Herbs can Improve Your Productivity.
https://blog.noisli.com/how-the-scent-of-herbs-can-improve-your-productivity/.Accessed October 18, 2016.
12 Scents That Can Literally Improve Your Day.
https://www.buzzfeed.com/gain/scents-that-can-literally-change-your-mood?utm_term=.rgBeaE8EP#.cneR1o3oE.Accessed October 18, 2016.
6 Scents That Can Transform Your Mood and Productivity.
https://www.entrepreneur.com/article/224575.Accessed October 18, 2016.